ဂေဇက်ရွာသူကြီးရဲ့ ပြောပေါက်ဆိုပေါက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာသူကြီးရဲ့ ပြောပေါက်ဆိုပေါက်
Posted by ဇောက် ထိုး on May 7, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
““ဗျို့သူကြီး..ဗျို့သူကြီး…ကျွန်တော်တို့လင်မယားမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။အဲဒါ လင်ခန်းမယားခန်းဖြတ်ပေးပါ။အခုဖြတ်ပေးပါ။ဒီမသာမကို မပေါင်းတော့ဘူး”
““ဟဲ့ ခင်လတ်တို့လင်မယားဘာဖြစ်လာကြတာလဲ အေးအေးသက်သာ ပြောဆိုကြစမ်း””
““ဟုတ်တယ် သူကြီး..ကျွန်မမဝေကလဲ သူ့ကိုမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။ အခု ချက်ခြင်းဖြတ်ပေးပါ။ သူ့ကိုဆက်ပေါင်းနေမယ့်အစား ခွေးကိုအမြီးဖြတ်ပြီးယူ ပေါင်းလိုက်မယ်။””
““ဟေ့ မိဝေ..မင်းငါ့ကိုခွေးနဲ့မနှိုင်းနဲ့။ မသာမ။သူကြီး ကျွန်တော်တို့ကို အခု ပဲဖြတ်ပေးပါ။ ဒီခွေးမကို လုံးဝကိုမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။””
““ကဲ….အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြလို့ပြောတာ မရပါလား။ ဒီမယ်မင်းတို့ ကို ငါပြောမယ်။ ငါက လူတွေကိုပဲ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာ။ လူမဟုတ်တဲ့သူတွေကို ငါစစ်ဆေးမေးမြန်းလေ့မရှိဘူး။ဆုံးဖြတ်ပေးလေ့ မရှိဘူး။””
““ဘာဂျ…သူကြီးခိုင်..ဘာစကားပြောတာလဲ၊ လူတွေကိုပဲ စစ်ဆေးမေးမြန်း ပြီး ဆုံးဖြတ်တာဆိုတော့…ကျုပ်တို့ကို သူကြီးခိုင်က လူမဟုတ်ဘူးလို့ပြော လိုက်တာလား။ဒီစကားက သူကြီးပြောတဲ့စကားလား။ကျုပ်တို့ကို လူမဟုတ် တဲ့ သူတွေဆိုတော့ ခွေးတွေလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ သူကြီးဆိုပြီး ငုံ့ခံနေမှာ တော့ မဟုတ်ဘူးနော် သူကြီးခိုင်””
““ဟေ့ကောင်…ငါက လူမဟုတ်တဲ့သူတွေကို မစစ်ဆေး မမေးမြန်ဘူးလို့ ပြောတာ…မင်းတို့ကိုခွေးလို့ငါမပြောဘူး။ မင်းပြောသလိုငါအသိညာဏ်မမဲ့ ဘူး။စကားကို ကိုယ်ထင်သလိုဆွဲပြောတာ….ယူပြောတာ…မလုပ်ရဘူး။ တောင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ မြောက်လို့ပြောမရဘူး။ အရှေ့လဲရှိသေးတယ်။ အနောက်လဲ ရှိသေးတယ်။ အထက်..အောက်..အများကြီးရှိသေးတယ်။””
““အဲလိုဆို ကျုပ်တို့ကို လူမဟုတ်တဲ့သူတွေလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ အဲဒါဆို ခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲ ပြောပါသူကြီး””
““အေး…မသိရင်မေး။ ခုငါ့ရှေ့ရောက်နေတဲ့ မင်းတို့လင်မယားဟာ လူစိတ် မရှိကြဘူး။ လူဆိုတာ အကြောင်းနဲ့အကျိုး…အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားပြီး သိတယ်ကွ။ ခု မင်းတို့ဟာ လူကြီးရှေ့မှန်း…သူကြီးရှေ့မှန်း..ရှက်ရမှန်း… ကြောက်ရမှန်း…တခုမှမသိကြဘူး။ ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်း မင်းတို့ကို ရွာသား တွေဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။
အဲဒီလို အကြောင်းအကျိုး..အကောင်းအဆိုး…ရှက်ရမှန်း…ကြောက်ရမှန်း မသိတာတဲ့စိတ်ဟာ ….လူ့စိတ်မဟုတ်လို့ပဲ။ အဲဒါ မင်းတို့မှာ ဒေါသစိတ် တွေဖြစ်နေလို့။ မောဟ စိတ်တွေဖြစ်နေလို့…..ငါဆိုတဲ့ မာနစိတ်တွေမွန်နေ လို့…အဲဒီလို လူ့စိတ်မဟုတ်တဲ့ လောဘ..ဒေါသ..မောဟ…မာန..ဆိုတဲ့ ကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်နေတော့…မင်းတို့ဟာ လူ့စိတ်နဲ့လူမဟုတ်တော့ ဘူး။ ကိလေသာစိတ်နဲ့လူ..ကိလေသာ ပူးနေသူတွေဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီ ဒေါသတို့ မာနတို့ဆိုတဲ့ကိလေသာစိတ်တွေဟာ လူမဟုတ်တော့ လူစကား…နားမလည်ကြဘူး။ ဒေါသတွေသိပ်ကြီးနေတဲ့သူတွေကို ဘယ် လောက်ကောင်းအောင်ပြောပြော နားမလည်ကြဘူး။ အကောင်းမထင် ကြဘူး။ အဲဒါ လူမဟုတ်လို့ လူ့စကားနားမလည်တဲ့ သဘောပဲ။
ခုမင်းတို့လင်မယားလဲ…ဒေါသတွေသိပ်ကြီးနေကြတယ်။ငါ့ရှေ့မှာကို ဆဲကြ ဆိုကြ.နဲ့။ နောက်ပြီး မောဟတွေလဲ သိပ်များနေတယ်။ နောက် ငါဆိုတဲ့ မာနတွေလဲ အရမ်းများနေတယ်။ ဒီတော့ မင်းတို့ဟာ လူလို့ထင်ပေမယ့် လူမဟုတ်ဘူး။ ကိလေသာစိတ်တွေဖုံးလွမ်းနေတဲ့ ကိလေသာ ကောင်ကြီး တွေ ဖြစ်နေတယ်။ မင်းတို့ကောင်းအောင် ငါက လူလိုဆုံးမလဲ မင်းတို့က ဒေါသတွေအားကြီးနေတော့ ဒေါသကိလေသာတွေဖြစ်နေတော့ …လူ့စကား နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ငါက လူမဟုတ်တဲ့ လူနဲ့စကား မပြော ဘူးလို့ဆိုတာ။
အခု မင်းဟာ…မင်းကိုမင်း လူလို့ထင်နေတယ်။ ခင်လတ်လို့ထင်နေတယ်။ တကယ်တော့ မင်းဟာ လူမဟုတ်ဘူး။ ခင်လတ်မဟုတ်ဘူး။ မင်းမှာ ဒေါသ ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေက ခွစီးပြီး အဲဒီဒေါသခိုင်းတိုင်းလုပ်နေရသူဖြစ်နေတာ။ ဒေါသက ဆဲလိုက်ဆိုရင်…မင်းဟာ ဆဲလိုက်တာပဲ။ ဒေါသက ပြောလိုက်ဆို မင်းက ပြောရတာပဲ။
ကဲ..မယုံရင် ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေကို ငါမေးကြည့်မယ်။ ကဲ ရွာသူ ရွာသားတွေ…အခု အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေသူဟာ ခင်လတ်ဟုတ်သလား။ ဒေါသလား။ ခင်လတ်ဆိုရင် ….ခင်လတ်ဟာ အမြဲဆဲနေရမှာနော်။ ခင်လတ်ဟာ အမြဲဆဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ ခုဒေါသထွက် စိတ်ဆိုးတုန်းမို့သာ ဆဲတာဆိုတော့ ခုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အရာဟာ စိတ်ဆိုးနေသူဟာ… ခင်လတ်လား။ ဒေါသလား။ ””
““အဲဒီဒေါသကြီးကို ငါလို့ပြောရမလား။ သူလို့ရော ပြောရမလား။””
““ဒေါသကို ငါလို့လဲ ပြောမရပါဘူး။ သူလို့လဲ ပြောမရပါဘူး။ ဒေါသဟာ ကိလေသာပါ။””
““အဲလိုဆိုရင်.. ဒေါသဆိုတဲ့ ကိလေသာကို ယောကျာ်းလို့ပြောရမလား။ မိန်းမလို့ပြောရမလား””
““ဒေါသကြီးလို ဘယ်လိုယောကျာ်းလို့ ပြောရမှာလဲ။ ဘယ်လို မိန်းမလို့ ပြောရမလဲ။ဒေါသဟာ လူမဟုတ်ဘူး။ ယောကျာ်းလဲမဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဟာ မိန်းမလဲမဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဟာ သူလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဟာ ငါလဲမဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဟာ စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်။””
““အဲလိုဆိုရင်…ခင်လတ်ရဲ့ မိန်းမ မဝေေ၀မှာကော ဒေါသတွေများမနေဘူး လား။ဒေါသတွေ အားကြီးမနေဘူးလား။””
““မဝေေ၀ မှာလဲ ဒေါသတွေအားကြီးနေပါတယ်။””
““ဒေါသဟာ လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်…လူမဟုတ်တဲ့ ကိလေသာဖြစ်တဲ့ ဒေါသကို လူလိုစကားပြောလို့ နားလည်ပါ့မလား။ စစ်လို့ဆေးလို့ ဖြစ်ပါ့ မလား။ ဒါကြောင့် မင်းတို့လင်မယားမှာ ဒေါသတွေ…မာနတွေ…မရှိတော့ လို့…လူ့စိတ်နဲ့လူကိုယ်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှ ပြန်လာခဲ့ကြ။ အဲဒီလို လူ့စိတ်နဲ့လူကိုယ်လေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်…စစ်လို့ရပြီ…မေးလို့လဲရပြီ…လူ့စကားလဲ နားလည်ပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။””
လာရောက်ကြည့်နေကြသူ ရွာသူရွာသားများအားလုံးလက်ခုတ်လက်ဝါး တီးပြီး အားပေးထောက်ခံကြသည်။
ရပ်မိရပ်ဖ..ဦးပါကြီးက..ဒါမှ တို့ဂေဇက်ရွာရဲ့ သူကြီးကွ..ဟုချီးမွန်းလေ သည်။နောက် ဦးပါက ဆက်ပြောပြန်သည်။
““ဟေ့ သူကြီး…တို့ဘုရားက လူကိုယ်ပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်…ကိလေသာ ကိုပယ်ရမှာလို့ပြောထားတာမဟုတ်လား…လူမှာ ကိလေသာမရှိမှ..ရဟန္တာ လို့ပြောထားတာမဟုတ်လား။ ခုပုံဆို တို့သူကြီးက လူနဲ့ကိလေသာခွဲမြင်ပြီ ဆိုတော့..ကိလေသာကို ပယ်ပြီး ရဟန္တာများ ဖြစ်တော့မှာလားဟ””
““ဟာဗျာ ရှုပ်နေတာပဲ။ မရဘူး..ခုဖြတ်ပေး။ ဖြတ်မပေးလို့ကတော့ အကြောင်းသိမယ်နော် သူကြီး…””
““ဒီမှာ သူကြီးခိုင်…ကျုပ်တို့လင်မယားက သူကြီးခိုင်ဆိုတဲ့ လူကြီးဥက္ကဋ္ဌကို လာတိုင်တာ…ဒေါသ ဆိုတဲ့ ကိလေသာကြီးကိုလာတိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒေါသဟာ လူမဟုတ်တော့…လူလိုမှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်တတ်မှာလဲ မဟုတ်ဘူး။ လာ မိန်းမပြန်မယ်။ သူကြီးမှတ်လို့ လာခဲ့ပါတယ်။လက်စသတ် တော့ ဒေါသကြီးကိုး…….””
““ဟေး………ဖျောင်း…ဖျောင်း…..ဖျောင်း…..ဖျောင်း….ဖျောင်း…….ဖျောင်း…ရွာသူရွာသားအားလုံး လူနဲ့ကိလေသာကို ခွဲမြင်ပြီး ကိလေသာကိုပယ်နိုင်ကြပါစေ။
မြတ်စွာဘုရားကို ဒေ၀ဒတ်က ကျောက်မောင်းချပြီးသတ်တုန်းက ဘုရားက ဒေ၀ဒတ်ကိုစိတ်မဆိုးပဲသနားတောင် သနားပါတယ်။ အော်ဒေ၀ဒတ်ကြီး ဒေါသတွေအားကြီးနေတယ်။ ငါ့ကိုပြိုင်ချင်တဲ့ မာနတွေ နှိပ်စက်ခံနေရတယ်။ ငါ့ကိုကျောက်တုန်းနဲ့ချတာဟာ ဒေ၀ဒတ်မဟုတ်ဘူး။ လောဘ ဒေါသ မာန ကိလေသာတွေပဲလို့မြင်တော့ ဘုရားဟာ ဒေ၀ဒတ်အပေါ်မှာ သနားမှုတောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇောက်ထိုးအတွေး……
အရေးအသားလေးက ထိတယ်ဗျာ.. မှတ်သားသွားပါတယ်
အဲဒီလင်မယား သဂျီးဆီ သွားကွာခိုင်းရင် သူဂျီးက ဒီလိုပြောမှာ
မချစ်မနှစ်သက်မဲ့အတူတူ အောင့်ပြီး ပေါင်းမနေကြနဲ့ 
အရွယ်ရှိတုန်း ရသမျှ စည်းစိမ် အကုန်ခံစားကြ..
၂အူးသဘောတူရင် အကုန်လုပ်ပေးမယ်..လာခဲ့ကြ “
အဟီး … ဂဲ တစ်လုံးထဲနဲ့ .. ငှက်သုံးကောင် တန်းထိတာပါပဲ … ။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက သဂျီးကတော့ ဘုရားဟောတွေ ၊ တရားဟောတွေ လက်ကိုင်ထားတဲ့ သဂျီး …
တိုရွာထဲက သဂျီးကတော့ .. ဟိဟိ … ပြောတော့ပါဝူးးးးးးးးးးးး နာ့ပွိုင့်တွေ ဖြတ်နေလျှင် ဒွတ်ခ … ။
ဒီတစ်ခါ အတည်ရေးမယ် … ။
စာလေးဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ စွဲကျန်စေခဲ့ပါတယ် … စာကိုဖတ်ပြီး … လျော့သင့်တာလည်း လျော့ဖို့ စိတ်ကူးဖြစ်မိပါတယ် … ။ ပြောမယ့်သာပြောတာ .. ဒီရက်ပိုင်း ဒေါသတွေအရမ်းကြီးနေလို့ …. အမှန်ကိုအမှန်တိုင်း မမြင်မိတဲ့ အဖြစ်တွေ အများကြီးရယ် …. ။
မိုးချမ်းမြေ့ရဲ့စာလေးသိပ်ကောင်းတယ်ဗျာ။ တိုတိုလေးနဲ့ထိတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ထပ်ပြီးတော့ ပြောချင်ပါ ချင်ပါသေးတယ်။
လူဟာ လူပဲ။ အပူဟာလဲ အပူပဲ။ သို့သော်လဲ လူနဲ့အပူဟာ ကင်းပြီးတော့လဲ မဖြစ်ဘူး။သို့သော်လဲ လူနဲ့အပူဟာ အတူလဲ မဟုတ်ဘူး။ အပူဟာ ငါလဲမဟုတ်ဘူး။ သူလဲမဟုတ်ဘူး။ ယောကျာ်းလဲမဟုတ်ဘူး။ မိန်းမလဲမဟုတ်ဘူး။ အပူဟာ အပူပဲ။ လူကလဲ လူပဲ။ လူမှာ အပူကင်းသွားတာထက် ကောင်းတဲ့အရာလဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
ပို့ စ်လေးက ရှယ်..ပဲ.။
ဒေါသတွေ သောကတွေ မောဟတွေ များနေလို့ နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေပါလား
မန်းတလေးဂေဇက် ကို ပုံမှန်လာပြီး ၊ စာဖတ်လိုက်ပါ မိတ်ဆွေ ။
ကတောက် စ်စ်စ်စ်စ်စ် (ထရိတ်မတ် ဂဂ)
ဒေါသအမျက် ချောင်းချောင်း ထွက် ကာ နာမည် အလွဲသုံးစားလုပ်မှု အတွက် တရားစွဲရန် ပြုံးပြုံးကြီး လုပ်၍ ဖတ်သွားပါကြောင်း။ :D
ဒါ့ထက် – ဒီလောက် တရားဟော ကောင်းနေမှ အပြင်မှာ ရော လူမှ ဟုတ်ရဲ့လား ကိုယ်တော် ဇောက်ထိုးရယ်။ ;-)
အသျှင် ဇောက်ထိုး ရွာသူတဦးရဲ့ အမည်ကို အသုံးပြုပြီး ဆဲနေတာလား လို့မေးပါရစေ..
မိုးပြာတရား ကို ပညာတက် ဗဟုသုတ ပြည့်စုံတဲ့ ဒေါ်ခင်လတ် တောင် ထောက်ခံလာနိင်အောင် ဟောပြောနိင်တယ်ဆိုတော့
အောင်မြင်မှာပါ …..အနှောက်အသွားလွတ်အောင် ဟောပြောဖို့ပဲတောင်းဆိုပါတယ်…
ရှင်ပြောသလို များဖြစ်ရင် သိတ်ကောင်းမှာလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သို့သော်လည်း ကိုယ့်ဝမ်းနာကိုယ်သာသိသမို့ ဂလို အကြောပါနဲ့ ကိုတညင် ရယ်။ :D
မှန်တာဝန်ခံရရင် အဲဒီ “မိုးပြာ” ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ Field ဖြစ်နေတာမို့ နာမည် ကြားဘူးတာက လွဲလို့ ကျွန်မ မလေ့လာခဲ့မိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ကို ကြည့်ရင် တစ်ခုခု ကနေ အစွဲလွတ်အောင် ကြည့်နိုင်ဖို့ ကျင့်နေတာ တော့ အမှန်ပါဘဲ။
ဒီ ဂေဇက်ရွာ က လေ့ကျင့်ကွင်း ပေါ့။ :-)
စာတတ်တိုင်း ပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပညာတတ်တိုင်းလဲ လူတော်မဟုတ်ဘူး။ လူတော်တိုင်းလဲ လူကောင်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဘုန်းဘုန်းတိုင်းလဲ စာမတတ်ပါဘူး။ စာတတ်တိုင်းလဲ တရားမဟောတတ်ပါဘူး။ တရားဟောတတ်တိုင်းလဲ…လက်တွေ့မဆန်ပါဘူး။ တရားဟောကောင်းတာနဲ့ အသျှင်ဇောက်ထိုးဖြစ် ရော့လား။ အဟမ်း…အဟမ်း။ ဟဲ့ ဂေဇက်ရွာက ဒကာ..ဒကာမ..တွေလာကြစမ်း။ ဟိုသူကြီးကိုပြောလိုက်….ကျောင်းကိုခေါ်ရင် မလာချင်တာ ဘာသဘောလဲ၊
ကျွန်တော်က မိုးပြာတို့ မိုးဖြူတို့ စိတ်မ၀င်စားတာအမှန်ပါ။ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာက ကျွန်တော်ငြိမ်း ချမ်းဖို့။ ကျွန်တော်ဘ၀ လွတ်မြောက်ဖို့ပါ။ ကျွန်တော် စာမတတ်ပါ။ သို့သော် သူများပြောတာတွေ နာထောင်ပြီး လူလိုသိအောင်ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေဟာ စာတွေပေါ်မှာ အခြေမခံပဲ လူအပေါ်မှာသာ အခြေခံတာပါ။ ကျွန်တော်ကို မိုးပြာလို့တော့ မစွပ်စွဲစေချင်ပါဘူး။ကျွန်တော့စာ မှားရင်။ သို့မဟုတ်….ဖတ်သူကို ဆင်းရဲသွားစေတဲ့ အသိဆိုရင် ကန့်ကွက်ပြီး ဆုံးမပေးကြပါလို့….ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဇောက်ထိုး ဆိုတဲ့ အတိုင်း တကဲ့ကို ဇောက်ထိုးပါပဲလား..
ရွာထဲက အမျိုးသမီး ၂ယောက်ကို လင်မယား လုပ်ထားတယ်။
ခင်လတ် ဆိုတာ အမျိုးသမီး.. အသက်ကြီးကြီး အဘွားကြီးတော့ မဟုတ်ပေမဲ့.. မိသားစုနဲ့ပေါ့။
ဝေေ၀ ဆိုတာ အပျိုကြီး.. အပျိုကြီး
မဆီလေးရယ်မှ မဆိုင် နာမည်တော့ အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်ဘူး။
နာမည် တွေ လွှဲ ပြီး ရေးလို့ ရရက်နဲ့ တမင်များ ရေးတာလား..
မသိပဲ ရေးတာလား.. သိသိကြီးနဲ့ လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ လုံးဝ မရိုးသားဘူး။
မသိပဲ ရေးမိတာ ဆိုရင်တော့ အရင်လေ့လာပါအုန်း။
အခုမှ သူများတွေပြောမှ ကြည့်မိတော့တယ် …
နံမည်ဆိုတာ ပညတ်တစ်ခုမို့ ဘာမှမပြောလိုပေမယ့် နံမည်တွေ အများကြီးပေးစရာရှိပါရက်နဲ့ ဒီလောက်တောင် ပေးစရာနံမည်ရှားသလားလို့ပဲ မေးလိုက်ချင်ပါတယ် …
သို့ သော်..ဂေဇက်ရွာသူကြီးရဲ့ ပြောပေါက်ဆိုပေါက် ..လို့ တော့ခေါင်းစဉ်မတပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်…
သို့ သော်…ဇောက်ထိုးပိူစ့်တော့ဖတ်ဖူးတာ..2ပုဒ်ရှိသွားပြီ…အချိန်ရတိုင်းဖတ်ချင်ပါရဲ့ ဗျာ
စာတတ်တိုင်း ပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပညာတတ်တိုင်းလဲ လူတော်မဟုတ်ဘူး။ လူတော်တိုင်းလဲ လူကောင်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဘုန်းဘုန်းတိုင်းလဲ စာမတတ်ပါဘူး။ စာတတ်တိုင်းလဲ တရားမဟောတတ်ပါဘူး။ တရားဟောတတ်တိုင်းလဲ…လက်တွေ့မဆန်ပါဘူး။
စိတ်ထဲမထားတဲ့အပြင်.. Satire အရေးကောင်းရင်.. အပြန်အလှန်တောင် ၀င်အားပေးရေးဦးမှာပါ..။
အရီးလတ်နဲ့.. အပျိုကြီးကို .. အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီးရေးတာတော့.. စည်းကျော်တယ်ထင်မိတယ်..
မသက်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့.. ပုဂ္ဂလိကအခွင့်ထိခိုက်စေနိုင်တာမို့ပါ..
…”ကိုရင်ဇောက်ထိုး”ရဲ့.. လက်တွေ့ကျအောင်.. ပြဌာန်းရေးတဲ့.. အတွေးအရေးကို.. ကြိုက်ပါတယ်..
ကဲဗျာ.. အားလုံး အေးဆေးဖြစ်သွားအောင် ဒီလိုလုပ်ပါလား.. ကျနော်တို့လင်မယား နာမည်သုံးလိုက်ပါ..
ယောက်ျားနေရာမှာ ရွာစားကျော်ကိုထည့် မိန်းမနေရာမှာ ရှင်မွေးလွန်းလို့ ပြင်ပေးပါလား သူကြီးခင်ဗျာ..
အိုကေ.. ကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ် :cool:
မသက်ဆိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့.. ပုဂ္ဂလိကအခွင့်ထိခိုက်စေနိုင်တာမိုပါ….
လူလိုပီသ ချင်ရင် လူလိုပဲရေးပါ…လူတွေဖတ်နေပါတယ်………………….